Cusbooneysiinta taleefoonka gacanta si ay u noqoto taleefan caqli badan, waxaan awood u siin karnaa koofiyad si ay u noqoto koofiyad caqli gal ah oo leh shaqooyin la doonayo ， ma aha oo kaliya inay bixiso ka hortagga saameynta laakiin sidoo kale waxay kobcineysaa khibradda is dhexgalka koofiyadda
Waxaan haynaa injineer farsamo yaqaan ah, injineer elektaroonig ah, injineer software.
Injineer makaanik ah, injineer Eletronic ah iyo injineer softiweer ah oo si aan kala go 'lahayn uga shaqeynaya isdhexgalka nalka LED / COB, Accelerometer iyo dareeraha leh koofiyadda heerka naqshadeynta si loo hubiyo nalka toosan ee loo yaqaan' LED light ', guddiga PCB, silig, batteri iyo mashiin fog fog. Intaa waxaa sii dheer, raac khariidada wadada ee saameynta koofiyada, baaritaanka guriga, cadeynta, ka shaqeynta nalka LED / COB nashqadeynta shaqsiga, barnaamijyada macruufka ama Andorid APP, dib u eegista & ogaanshaha ciladaha, barnaamijyada Launch.
Chips on Board (COB) waxay u oggolaaneysaa raad aad u kooban oo isdaba-joog ah iyada oo la bixinayo iftiin aad u sarreeya oo iftiinka siinaya iftiinka muuqaal isku mid ah.
Waxaan soo bandhigi doonnaa wax soo saar koofiyad caqli-gal ah oo dhan, OEM iyo ODM loo habeeyay, shaqeynta helemt caqli-gal ah, CMT loo habeeyay.
Nidaamka Horumarinta App ee loo qaybiyay toddobada marxaladood ee soo socda oo isku xigxiga:
Laga soo bilaabo bilowgii shirkadda si loo maro taleefanka shirkadda, marxaladdan ayaa bilaabantay. Had iyo jeer waa maareeyaha suuqgeynta shirkadda ee ku xira shirkadda. Iyagoo ku saleynaya khibradooda gaarka ah, maareeyaha suuq geynta, ka dib kala soocida hordhaca ah, wuxuu soo koobay nooca APP ee shirkadu ubaahantahay inay horumariso, inay jiraan shuruudo gaar ah iyo wixii la mid ah. Ku tali shirkadda in ay maamulaha wax soo saarka u dhiganta sida ay u kala soocidda.
2. Marxaladda isgaarsiinta
Maamulaha wax soo saarku waa inuu ka ciyaaraa doorka buundada ee tan, oo uu ku sameeyaa wareysiga isticmaalaha, falanqaynta dalabka iyo dalabka dalabka si taxaddar leh. App noocee ah ayay shirkaddu dooneysaa inay sameyso, howl noocee ah ayuu barnaamijku doonayaa inuu ogaado, qaab noocee ah ayuu barnaamijku doonayaa guud ahaan, iyo qaabkee ayuu barnaamijku barnaamijku ula qabsadaa. Kadib isgaarsiin nidaamsan iyo aruurinta kadib, waxaa lagu wareejiyaa kooxda farsamada si loo hirgaliyo. Shirkaduhu waxay si joogto ah ugu wanaajiyaan barnaamijyadooda horumarinta barnaamijyadooda isgaarsiinta.
3. Marxaladda qaabeynta isdhexgalka
Marxaladdan, shirkaddu waxay asal ahaan go'aamisay nidaamka guud ee barnaamijka, waxayna gashay marxaladda naqshadeynta. Marxaladda naqshadeynta waxaa ka mid ah: habka geeddi-socodka, naqshadeynta isdhexgalka isdhexgalka, naqshadeynta nooca sare ee jilitaanka iyo bixinta nidaamka isdhexgalka. Naqshadeynta ayaa ah mid shakhsiyan ah, oo aan la hubin qaarkood. Sidaa darteed, habka naqshadeynta, waa inaannaan tixgelin oo keliya qaabka shirkadda, laakiin sidoo kale aqbalaadda dhagaystayaasha. Labadan dhinac waxay gaarayaan isku dheelitirnaan, waxay sameeynayaan saameyn horudhac ah oo khariidada ah, sida ku cad natiijooyinka gaarka ah ee xiriirka shirkadda lala yeelanayo wax ka beddelka labaad, ugu dambeyntiina lagu xaqiijiyo khariidadda muuqaalka leh macaamilka.
4. Masrax hal abuur leh
Habeen ka hor hal-abuurnimada, shirkadeena waxay inta badan ku bilaabataa maskax-furid si loo dhiso jihada hore iyo hanuuninta hal-abuurka. Marka xigta, waxaan siin doonnaa isticmaaleyaasha waxqabad hal abuur leh, shabakadda shabakadda, sharaxaadda hal abuurka iyo wixii la mid ah. Ka dib markii la go'aamiyay shirkadda, hal-abuurka waxaa lagu dabaqi doonaa isku xirka xiga.
5. Marxaladda soo saarista dhammaadka hore
Shaqada ugu weyn ee marxaladan waa in la naqshadeeyo UI isla markaana la xaqiijiyo isdhexgalka-dhamaadka dhamaadka bogga oo leh luqadda qoraalka Java. Waxaa ka mid ah: qeexida sifaha, sameynta bogga iyo buulista teknolojiyada, iswaafajinta nidaamka, baaritaanka unugyada, hagaajinta cayayaanka.
6. Marxaladda horumarinta tikniyoolajiyadda.
Markaad geleyso marxaladda horumarinta, doorashada ugu horreysa waa in la qiimeeyo mashruuca laftiisa, oo go'aan horudhac ah laga gaaro wareegga R & D, waqtiga baaritaanka iyo waqtiga sii deynta ka hor. Kadibna waa in la kala diro shaqooyinka loona diyaariyo horumarka, iyadoo la raacayo habka loo qoro - nidaamka isdhexgalka - baaritaanka nidaamka - hagaajinta cilladaha - gaarsiinta. Marxaladda horumarineed waxay u baahan tahay oo keliya inay samir ku sugto shirkadda.
7. Marxaladda aqbalida macaamiisha
Ka dib marka barnaamijka la dhammeeyo, wuxuu u baahan yahay inuu sugo tijaabiyayaal xirfadlayaal ah si ay u tijaabiyaan, waxyaabaha ku jira imtixaanka waxaa ka mid ah waxqabadka barnaamijka, shaqadiisa, waxyaabaha uu ka kooban yahay, iwm. Haddii uusan wax cillad ahi ku jirin imtixaanka, markaa waa la aqbali karaa. Shaqada ku jirta barnaamijka internetka ayaa noqon doonta mid culeys badan, shirkado badan ayaa u baahan iskaashi. Abka la soo saaray wuxuu u baahan yahay in dib loo eego markii laga bilaabay barnaamij kasta
IOS APP iyo Android APP.
Muujinta Iftiinka Iftiiminta LED / COB
Nalalka Signal ee ku jira
Xakamaynta Fog ee Bluetooth.
Sensor ama Sensor Sensor.